45 “‘Mgbe unu kere ala ahụ ka ọ bụrụ ihe nketa unu,+ unu ga-enye Jehova onyinye.+ Unu ga-enye ya mpaghara dị nsọ n’ala ahụ;+ ogologo ya ga-adị puku kubit iri abụọ na ise, obosara ya ga-adị puku kubit iri.+ Ọ ga-abụ mpaghara dị nsọ n’ókè ya niile gbaa gburugburu. 2 A ga-esi na ya nweta ebe nsọ nke akụkụ ọ bụla n’ime akụkụ ya anọ ga-adị narị kubit ise.+ Akụkụ ya nke ọ bụla ga-enwe ala ịta ahịhịa nke dị kubit iri ise.+ 3 Ị ga-esi n’ala ahụ tụpụta ala nke ogologo ya dị puku kubit iri abụọ na ise, obosara ya adịrị puku kubit iri, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka ebe nsọ ga-adị, nke bụ́ ihe kasị nsọ.+ 4 Mpaghara ahụ dị nsọ e wepụtara n’ala ahụ ga-abụ nke ndị nchụàjà,+ bụ́ ndị na-eje ozi n’ebe nsọ, ndị na-abịa n’ihu Jehova ijere ya ozi.+ Ọ ga-abụ ebe ha ga-ewu ụlọ, bụrụkwa ebe dị nsọ a ga-arụ ebe nsọ ahụ. 5 “‘Ọ ga-adị puku kubit iri abụọ na ise n’ogologo nakwa puku kubit iri n’obosara.+ Ọ ga-abụ nke ndị Livaị, ndị na-eje ozi n’Ụlọ ahụ. Ha ga-enweta ụlọ iri ihe iri abụọ ka ọ bụrụ ihe onwunwe ha.+ 6 “‘Unu ga-enye ala dị puku kubit ise n’obosara, na puku kubit iri abụọ na ise n’ogologo, ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke obodo ahụ, dị nnọọ ka onyinye dị nsọ.+ Ọ ga-abụ nke ụlọ Izrel dum. 7 “‘Onyeisi ga-enwe ala n’otu akụkụ nakwa n’akụkụ nke ọzọ nke onyinye ahụ dị nsọ+ nakwa nke ala obodo ahụ, n’akụkụ onyinye ahụ dị nsọ nakwa n’akụkụ ala obodo ahụ, ya bụ, ala nke ga-adị n’ebe ọdịda anyanwụ na ala nke ga-adị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ogologo ya ga-aha nnọọ ka otu n’ime ala ahụ ebo dị iche iche ketara, malite n’ókè nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ ruo n’ókè nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ.+ 8 Ala ahụ ga-abụ nke ya n’Izrel. Ndị m mere ndị isi agakwaghị emegbu ndị m,+ ha ga-ekere ụlọ Izrel ala ahụ dị ka ebo ha niile si dị.’+ 9 “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘O zuolara unu, unu ndị isi Izrel!’+ “‘Kwụsịnụ ime ihe ike na ibukọrọ ihe ndị mmadụ,+ kpeenụ ikpe ziri ezi, meekwanụ ezi omume.+ Kwụsịnụ ịpụnara ndị m ihe,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. 10 ‘Unu ga-enwe ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa ziri ezi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat ziri ezi.+ 11 Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat ga-aha nhata, ka otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa baa n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat, ka otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa baakwa n’otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa;+ ihe ga-adị na ya ga-aha ka nke dị n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa. 12 Otu shekel+ ga-abụ gira iri abụọ.+ Shekel iri abụọ, shekel iri abụọ na ise na shekel iri na ise ga-abụrụ unu otu mene.’ 13 “‘Nke a bụ onyinye unu ga-enye, otu ụzọ n’ụzọ isii nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa site n’otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa nke ọka wit, tinyere otu ụzọ n’ụzọ isii nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa site n’otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa nke ọka bali. 14 Òkè mmanụ unu ga-enye ga-abụ mmanụ juru otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat. Otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat ga-abụ otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ kọọ. Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat iri bụ otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa; n’ihi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat iri bụ otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ homa. 15 A ga-enyekwa otu atụrụ nke si n’ìgwè atụrụ, n’ime narị atụrụ abụọ ndị si n’ìgwè atụrụ n’Izrel,+ maka àjà ọka+ nakwa maka àjà a na-esurecha n’ọkụ+ nakwa maka àjà udo,+ iji kpuchiere ha mmehie ha,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. 16 “‘Ọ bụ ndị niile nọ n’ala a ga-enye onyeisi Izrel+ onyinye a.+ 17 Ọ bụkwa onyeisi+ ahụ ka ọ dịịrị ịchụ àjà a na-esurecha n’ọkụ+ na àjà ọka+ na àjà ihe ọṅụṅụ+ n’oge ememme+ nakwa n’ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ+ nakwa n’ụbọchị izu ike,+ n’oge ememme niile nke ụlọ Izrel.+ Ọ bụ ya ga-eweta àjà mmehie na àjà ọka na àjà a na-esurecha n’ọkụ na àjà udo, iji kpuchiere ụlọ Izrel mmehie ya.’ 18 “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘N’ọnwa mbụ, n’abalị mbụ n’ọnwa ahụ, ị ga-ewere nwa oké ehi nke si n’ìgwè ehi, nke ahụ́ dị mma,+ ị ga-asachapụkwa ebe nsọ m mmehie.+ 19 Onye nchụàjà ga-ewere ọbara nke anụ àjà mmehie ahụ tee n’awara ụzọ+ Ụlọ ahụ nakwa na nkuku anọ nke nkebi gbara ebe ịchụàjà ahụ+ gburugburu nakwa n’awara ụzọ ọnụ ụzọ ámá nke ogige dị n’ime. 20 Otú ahụkwa ka ị ga-eme n’abalị asaa n’ọnwa ahụ n’ihi onye ọ bụla nke mehiere n’amaghị ama+ nakwa n’ihi onye na-amaghị nke a na-akọ; unu ga-ekpuchikwa mmehie Ụlọ a.+ 21 “‘N’ọnwa mbụ, n’abalị iri na anọ n’ọnwa ahụ, unu ga-eme ememme ngabiga.+ Dị ka ememme a ga-eme ụbọchị asaa. Ọ bụ achịcha na-ekoghị eko ka unu ga-eri.+ 22 N’ụbọchị ahụ, onyeisi ga-eweta nwa oké ehi ọ ga-eji chụọ àjà mmehie maka onwe ya na ndị ala a niile.+ 23 Ụbọchị asaa niile a ga-eme ememme ahụ,+ ọ ga na-eweta ihe a ga-eji chụọrọ Jehova àjà a na-esurecha n’ọkụ, bụ́ ụmụ oké ehi asaa na ebule asaa, ndị ahụ́ dị mma, kwa ụbọchị ruo ụbọchị asaa.+ Ọ ga na-ewetakwa mkpi a ga-eji chụọ àjà mmehie kwa ụbọchị.+ 24 Ọ ga-ewetakwa otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa maka nwa oké ehi iji chụọ àjà ọka, wetakwa otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa maka ebule. Mmanụ ọ ga-eweta ga-abụ otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ hin maka otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa.+ 25 “‘N’ọnwa nke asaa, n’abalị iri na ise n’ọnwa ahụ, mgbe a na-eme ememme ahụ,+ ọ ga na-eweta ihe ndị a ruo ụbọchị asaa,+ otu ihe ahụ o wetara maka àjà mmehie, otu ihe ahụ o wetara maka àjà a na-esurecha n’ọkụ, nakwa maka àjà ọka, nakwa maka mmanụ.’”